तपाइँको अफलाइन मार्केटिंगमा अनलाइन नबिर्सनुहोस्! | Martech Zone
बुधबार, जुन 11, 2008 आइतबार, डिसेम्बर 10, 2017 Douglas Karr
अनलाइन उपभोक्ता व्यवहार अनलाइन मार्केटरहरूको लागि अनमोल हुँदै गइरहेको छ, तर मुख्य रूपमा अफलाईन संस्थाहरूको सन्दर्भमा याद गरिएको छ। धेरै कम्पनीहरूसँग जससँग खुद्रा स्टोरहरू, साथै अनलाइन स्टोरहरू छन्, ती दुई दर्शकहरूलाई छुट्टै व्यवहार गर्दछन्, अर्कोलाई लक्षित र ट्र्याक गर्ने उत्कृष्ट अवसर हराइरहेको छ।
विकसित विश्लेषण एप्लिकेसनहरू जस्तै वेबट्रेंड्स, कोरोमेट्रिक्स, र ओम्न्यूर्टलाई ठूलो मात्रामा रिपोर्टि systems प्रणालीको रूपमा व्यवहार गरिएको छ तर मूल्यवान उपभोक्ता डाटा राख्छ जुन सेगमेन्ट हुन सक्छ र तपाईंको डाटा भित्र विशिष्ट आगन्तुकहरूलाई लागू गर्न सकिन्छ।
ईमेल सेवा प्रदायकहरू व्यवहार डाटा को मात्रा पनि समात्छ। एनालिटिक्सको साथ मिलेर यी प्रणालीहरूले उपभोक्ताको व्यवहार ट्र्याक गर्न सक्दछ क्लिक-थ्रुबाट रूपान्तरण सम्म। तपाइँको आगन्तुकहरु लाई अनलाइन Pushing यो डेटा स collect्कलन गर्न सरल मार्ग प्रदान गर्दछ। तपाइँको प्रस्तावहरु मा, यो तपाइँको प्रत्येक ग्राहकहरु को लागी एक अद्वितीय कुञ्जी समावेश फाइदाजनक छ।
जसरी तपाईं एक सीधा मेल टुक्रामा अभियान कोड समावेश गर्न सक्नुहुनेछ, एक अद्वितीय ग्राहक कुञ्जी स to्कलन गर्न अवतरण पृष्ठ निर्माण गर्ने त्यो ग्राहकलाई ट्र्याक गर्ने एक प्रभावकारी माध्यम हो। त्यो अवतरण पृष्ठले अतिरिक्त मार्केटिंगमा एक अनुमति-आधारित अप्ट-इन प्रदान गर्न सक्दछ। कुञ्जी तब क्वेरीस्ट्रिंग (http://mycompany.com/'s=12345) मार्फत वेब ठेगाना (URL) को अन्त्यमा थप्न सकिन्छ र कुकीमा बचत गर्न सकिन्छ जहाँ यो तपाईंको साइटमा अनौठो ट्र्याक गर्न सकिन्छ।
बढ्दो अनलाइन व्यवहार भएका घरहरू तपाईंको प्रत्यक्ष मेल र टेलिमार्केटिंग सूचीबाट विभाजन गर्न सकिन्छ, र यसको सट्टामा, ईमेल पठाइन्छ - लक्षित, समयमै सन्देश धेरै कम लागतमा प्रदान गर्दै। यो याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ CAN-स्प्याम संघीय नियमहरु लागू गर्नुहोस् र सब भन्दा राम्रो सल्लाह भनेको ईमेल ठेगानाहरू स्वेच्छाले संकलन गर्नु हो र सम्मानितको साथ काम गर्नु हो ईमेल सेवा प्रदायक तपाइँको समस्याबाट टाढा राख्नको लागि डेलिभरेबिलिटी र सदस्यता रद्द सेवाहरू प्रदान गर्दछ।
यो नबिर्सनुहोस् कि तपाईंको मार्केटिंग प्रयासहरूले तपाईंको लेनदेन ईमेलहरू पनि पिगी-ब्याक गर्न सक्दछन्। लेनदेन ईमेलहरू कुनै पनि ईमेलहरू जुन विक्रेताबाट प्रतिक्रियाको रूपमा आशा गरिन्छ। एक जोडी उदाहरण बिलि and र / वा पुष्टिकरण सन्देशहरू छन्। यदि तपाईंको कम्पनी अनलाइन बिलि doing गर्दैछ भने, तपाईं प्रीमियम रियल ईस्टेटको साथ अपसेल वा अतिरिक्त प्रस्ताव बनाउनको लागि एक मुख्य अवसर हराउँदै हुनुहुन्छ!
यदि सन्देश मुख्य रूपले लेनदेनको हो भने, CAN-SPAM लागू गर्न आवश्यक पर्दैन। तपाईको प्राथमिकताहरू मिलाउन नसक्ने निश्चित हुनुहोस् किनकि तपाई एकदम राम्रोसँग अन्त गर्न सक्नुहुनेछ। ईमेल मार्केटिंगले उपभोक्ता विभाजनमा आधारित गतिशील सामग्री प्रदान गर्दछ। यसले तपाईंलाई तपाईंको ग्राहकमा आधारित सन्देशको ईमेल वा इमेजरी भिन्न गर्न अनुमति दिन्छ।
कलेजको विद्यार्थीको बिरुद्द परिवारलाई सन्देशमा बिभिन्न प्रकारको शाब्दिक र छविहरू हुन सक्छन् - तर अझै समान ईमेलमा बाहिर जानुहोस्! तपाईंको ईमेलमा लिंकहरू अवतरण पृष्ठ वा साइटमा ट्र्याक गर्न सकिन्छ जहाँ सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीहरूले गतिशील सामग्री पनि प्रस्ताव गरिरहेका छन्। यो डाटा विज्ञापनदाताहरूका लागि पनि अत्यन्त मूल्यवान हुन सक्छ।
डेमोग्राफिक डाटाको साथ तपाईंको अनलाईन आगन्तुकहरूलाई मर्ज गर्ने क्षमता सम्भावित विज्ञापनदाताहरूलाई शानदार डेमोग्राफिक प्रोफाइल र विश्लेषणको साथ प्रदान गर्ने ठूलो अवसर हो - जुन अनलाइन सेवाहरूको तुलनामा कम महँगो र अधिक सटीक हुनेछ जुन प्रस्ताव गर्दछ।
तपाईंको डाटामार्टका लागि डाटाका दुई थप स्रोतहरूमा सोच्नुहोस्: वेब विश्लेषण र इमेल मार्केटिङ। तपाईंको अफलाइन मार्केटिंगमा डाटालाई लाभ उठाउनुहोस् साथसाथै तपाईंको ईमेल मार्केटिंग प्रयासहरूमा समाहित गर्नुहोस्! तपाईं बढ्दो हुलाकमा एक टन पैसा बचाउनुहुनेछ र तत्काल परिणामहरू अनलाइन मापन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
टैग: विश्लेषणस्प्यामकोरमेट्रिक्सप्रत्यक्ष मेलईमेलईमेल सेवा प्रदायकespसर्वव्यापीपरम्परागत बजारवेबट्रेंडहरू
जुन २,, २०१ बिहान :13:२२ बिहान
यो हास्यास्पद हो यो होइन; धेरै जसो मार्केटरहरूले उनीहरूको मार्केटिंगमा उस्तै दृष्टिकोण लागू गर्छन्। बजेटहरू अग्रिम तरिकाले सेट गरिएको छ र पहिले जस्तो समान दृष्टिकोण लिनेमा आधारित छ। यद्यपि, स्मार्ट सोच आवश्यक छैन? त्यसोभए रणनीति केमा विकसित हुनुपर्दछ कि के गर्नुपर्‍यो वा अब गर्न सकिन्छ? हामीसँग हाम्रो एकीकृत अभियानहरू र ईतिहासको लागि मिडियाको एक धेरै ठूलो मिश्रणसँग खेल्ने अवसर छ कि यसले हामीलाई सिर्जनात्मक चिन्तकहरू देखाउँदछ जसले आफ्ना लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने इनामहरू कटनी गर्छन्।
कम्पनीहरु, र एक उद्योग को लागी, नवाचार मा गर्व गर्दै यो अधिक नवीन बन्न गाह्रो काम हुन हुँदैन।